मप विश्वविद्यालयको अनलाइन परीक्षा, साढे ७ हजार बढि विद्यार्थी सहभागि – Enayanepal.com
सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आइतबारबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत परिक्षा सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले भौतिक रुपमा विद्यार्थी उपस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले अनलाईन मार्फत परिक्षा सुरु गरेको हो । परिक्षामा साढे ७ हजार बढि विद्यार्थीहरु सहभागि भएका छन् । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १८ वटा परीक्षा केन्द्रबाट ७ हजार ५ सय ५५ जना विद्यार्थी सहभागि भएको परिक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख डा. आनन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।
परीक्षामा मानविकीका १ हजार ४ सय ४१, शिक्षाशास्त्रका २ हजार ४९९, व्यवस्थापनका १ हजार ८८८, विज्ञान प्रविधीका ३९४, ईन्जिनियरिङ्गका ९ सय ५५ र कानून सङ्कायका ७८ जना विद्यार्थी सहभागि भएका छन् ।
डा. सुवदीका अनुसार मानविकी, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधी, इन्जिनियरिङ्ग र कानून सङ्कायका विद्यार्थी परिक्षामा सहभागि भएका छन् । भने स्नातक तहको, प्रथम, तेश्रो र पाँचौं सेमेष्टर र स्नातकोत्तर तहका प्रथम सेमेष्टरका आंशिक तथा नियमित परिक्षाहरु सुरु भएका छन् ।
परीक्षा दिनका लागि विद्यार्थीलाई विश्विद्यालयले बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजे सम्मको समय निर्धारण गरेको छ । उक्त समयावधिभित्र परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकामा लेखेर पिडिएफ बनाई तोकिएको सङ्कायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।